आज फस्ट जुलाई १५४ औं क्यानडा डे ! प्रधानमन्त्री टुडो द्धारा देश बासीलाई शुभकामना सहित सम्बोधन !! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > आज फस्ट जुलाई १५४ औं क्यानडा डे ! प्रधानमन्त्री टुडो द्धारा देश बासीलाई शुभकामना सहित सम्बोधन !!
राजु थापा, क्यानडा । जुलाइ १, २०२१ । क्यानडा क्षेत्रफलको आधारमा रुस पछि संसारको दोश्रो ठूलो देश हो । क्यानडा १० वटा प्रान्त र ३ वटा क्षेत्रलाई समेटेर फैलिएको छ । यहांको क्षेत्रफल ९९८५ मिलिएन किमि रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या करिव ३८ मिलिएन हाराहारि रहेको छ ।
सन् १८६४ देखि १८६७ सम्म नोभा स्कोटिया, न्यू ब्रन्सविक र क्यानाडा प्रान्तका प्रतिनिधिहरूले बेलायती सहयोगमा नयाँ देश स्थापना गर्न सँगै मिलेर काम गरे। ति व्यक्तिहरूलाई महासंघका फादरहरू भनेर चिनिन्छन्। तिनीहरूले सरकारको दुई स्तरहरू बनाएस् संघीय र प्रान्तीय।
बेलायती संसदले सन् १८६७ मा बेलायती उत्तरी अमेरिका ऐन पारित गर्‍यो। क्यानाडाको डोमिनियन आधिकारिक रूपमा जुलाई १, १८६७ मा जन्मेको थियो। १९८२ सम्म जुलाई १ लाई डोेमिनियन डे को रूपमा मनाइन्थ्यो त्यस दिनको स्मरणार्थ क्यानाडाले स्वशासित शासन गर्ने दिन बनायो। आज यसलाई आधिकारिक रूपमा क्यानाडा दिवसको रूपमा चिनिन्छ मनाउदै आइरहेको छ ।